Manchester United oo hoos u dhigtay xiisihii Jadon Sancho, una weecatay weeraryahan ka tirsan Kooxda Borussia Dortmund – Gool FM
“Kama fakarayo tartanka aan kula jiro Cristiano Ronaldo.” – Romelu Lukaku
Manchester United oo hoos u dhigtay xiisihii Jadon Sancho, una weecatay weeraryahan ka tirsan Kooxda Borussia Dortmund
Haaruun January 3, 2021
(Manchester) 03 Jan 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warinayaa inay diyaar u tahay inay hoos u dhigto xiisihii ay u qabtay Jadon Sancho, isla markaana taas bedelkeeda ay u weecato weeraryahanka ay ka wada tirsan yihiin Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland.
Red Devils ayaa si weyn loola xiriirinayey Sancho intii lagu guda jiray suuqii kala iibsiga ee xagaagii la soo dhaafay, laakiin diyaar uma ahayn inay bixiyaan 107 milyan oo gini oo ay Dortmund ku dooneyso ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England.
Da’yarkii hore ee Kooxda Manchester City ayaa ku dhibtooday qaab ciyaareedkiisa xilli ciyaareedkan, isagoo ku guuldarreystay inuu shabaqa soo taabto 11 kulan oo uu saftay Bundesliga, sida laga soo xigtay Jariiradda The Mirror, Man United ayaa haatan ka doodaysa inay dib u soo celiso xiisaheeda xiddigan ka hor xilli ciyaareedka 2021-22.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in kooxda 20-ka goor ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska ay doorbideyso inay u dhaqaaqdo Haaland oo bartilmaameed u ahaa kooxda ka hor inta uusan ka tagin Red Bull Salzburg oo uusan ku biirin Borussia Dortmund bishii Janaayo ee 2020.
Sancho ayaa wali la sheegayaa inuu diiradda u saaran yahay Man United, laakiin Haaland ayaa ah dooqa koowaad u ah haatan, iyadoo ciyaaryahanka reer Norway uu dhaliyay 33 gool 32 kulan oo uu u saftay BVB tan iyo imaatinkiisii.
20-sano jirkaan ayaanay u badnayn in loo ogolaan doono inuu ka tago garoonka Signal Iduna Park xagaagan, laakiin waxaa la filayaa inuu baxo sanadka 2022 marka qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa la bixin karo.
Xiddiga kooxda Real Madrid ee Dani Carvajal oo seegi doona kulanka Osasuna & Tababare Zinedine Zidane oo ka hadlay
Manchester City oo ku dhow inay la soo wareegto xiddig ka tirsan Kooxda Atletico Madrid